umbuzo ezigqithisileyo zokukhuphela
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #819 by sylvantino
Ndikho kwi-6 inyanga ye-jumbo yokubhalisa kodwa andinakukwazi ukukhangela i-1300KB / sec ngesivinini sokukhuphela kwesiqendu kule ndawo kungakhathaliseki ukuba yiyiphi ikhutshulwa, le yiyona ndawo kuphela endiyingxaki. Ngaba umntu angabonakala kulezi zivinyi?
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #821 by rikoooo
Ndibeke i-bandwidth engaphezulu kwiseva yethu namhlanje, nceda uzame kwakhona ngoku.
Ngendlela ngoMsombuluko ndinomsebenzi kwi-data-center kwakukho amaseva ethu abanjwe, ndiya kucela ukugqithiswa kwamanqanaba angaphezulu kwithuba elide singakwazi ukukhonza ngesivinini esiphezulu.
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #822 by Gh0stRider203
Ndithumela njengomsebenzisi, kwaye kungekhona umodareli, kodwa andizange ndibe neengxaki ngokukhawuleza ukuphuma kwiRiooooo.
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #823 by StonewallUSMC
waya kwi-osprey, yithatha kuphela iiyure ze-26 kwaye yavula iifayile ezingenanto, yahamba okwesihlandlo sesibini i-12hrs 45 kwifayile engenanto, yaya kwaye yenze enye yodwa eyasebenza kwaye ibekho inqaku ngumdali xa kufaka malunga ukufakwa komphathi, ukucacisa, ngokuqhelekileyo xa ubhekisela kwisicatshulwa sokumisela ukuze usebenzise umkhiqizo usebenzise imenyu kunye nezikhundla okanye ucofe ucofa uze usebenze, ukudideka yile, ayikho into enxulumene nefayile, kufuneka usebenze ISimulator yendiza yemoto kwimodi yomlawuli ngokuchofoza ngakwesokudla kwaye umkhiqizo uya kulayisha. Ukuba kwenziwe ngenye indlela kuya kubangela ukuphazamiseka okuphindaphindiweyo kunye nokufakelwa kwesikrini. Ndenze uphando, kutheni bekube ngumgca wemiyalelo yokusebenzisa umlawuli ukuze usebenzise le nkqubo. Kwamawaka ekongezwa kwindlela yendiza yile yodwa ephela ekulawuleni i-cfg yam. Ifayile, ndangena ndaza ndabona uludwe oluninzi. Iirejista kwakhona ingozi kulo miselo kwaye ukuba kukho i-glitch ingonakalisa inkqubo yeefestile. Ukuba ukhetha ukukhuphela yenza ukwenza isipele kwifayile yakho cfg phambi kokuba ufake. Indawo yefayile injalo% APPDATA% MICROSOFT / FSX. I-AIROLANE OKUKHULULEKILEYO YOKUPHILA KUNYE NAKUBONA IMINYAKA EMINYAKA YO MODELO NOKUPHILA, UKUPHILA KUNYE KUNYE OKUQHELEKILEYO, KUTHETHA UKUTSHENZISWA KUNYE UKUTSHENZISWA KWEENKQUBO KANYE NOKWENZA KUNYE OKUQHUBEKILEYO NGOKUQHUBEKA OKUQHUBILEYO. kwaye ubale, kodwa bonke baya kusebenza. Yoy akayi kukhutshwa ngaphandle kokuba uqaphele ukuba konke okufuneka ukwenze kukucofa kumlawuli ukuba usebenze njengomphathi, kwaye ubhala. Ngaphandle kwalowo kwaye uzama nayiphi na enye indlela iya kuba yinkqubo enzima ukujongana ne-ESPECIALLY ukuba ulinde i-24 hrs ngokukhuphela okungenanto. Isona sisona sikhulu esona sihle kunye neyona nto ibongeza kwi-bar.
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #824 by 200k
iinyanga 10 4 iintsuku ezidlulileyo #1091 by StonewallUSMC
udinga ukungena kwimenyu yekhompyutheni kwi-intanethi uze utshintshe ikhasi lakho lasekhaya ukuya kwi-rikoooo, ukuba wenza loo fayile iya kuba ngaphambili, kwaye khangela iisetingi zakho ze-intanethi ukuba awusebenzisi iPPOE (kufuneka usebenzise iphasiwedi ukungena kwi-intanethi) uyitshintshe kwenye inketho. Enye yeengongoma eziphambili zombambano kwikhompyutha yaya kwi-intanethi kwi-portal ephosakeleyo, ndisebenzisa i-intanethi yangasese ngezinye iinkcukacha kwaye i-East yonxweme kummandla wase-Atlantic kwaye ngamanye amaxesha iyancipha ngenxa yemali yokukhuphela iqhutywe ngamaseva. Khangela kwakhona iwashi, ukuba i-US yakho inokuthi uyayilanda xa wonke umntu eYurophu ephakamileyo yosuku lwakhe. Bambeni ngokuhlwa ngokukhawuleza ixesha labo. Khangela ezo zicwangciso, kwaye ukuba ufuna ukukhawulezisa ikhompyutheni yakho kwi-200% bhala kuyo, ukuba ndiyabona ugula kukuxelele ukuba wenzeni.
Ixesha ukwenza page: 0.221 imizuzwana